सूर्यदर्शनको नाफा ८० प्रतिशतले बढयो | गृहपृष्ठ
Home लगानी सूर्यदर्शनको नाफा ८० प्रतिशतले बढयो
सूर्यदर्शनको नाफा ८० प्रतिशतले बढयो
साउन २२, काठमाडौं (अस)। गत आवमा सूर्यदर्शन फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको खुद नाफा ८० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा रू. ८७ लाख ३२ हजार रहेको फाइनान्सको खुद नाफा आव २०६७/६८ मा १ करोड ५७ लाख ७३ हजार पुगेको हो । बैङ्कले प्रकाशित गरेको आव २०६७/६८ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा यो तथ्य उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको सञ्चालन मुनाफा ७८ प्रतिशतले बढेपछि खुद नाफा पनि बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको कर्मचारी तथा अन्य सञ्चालन खर्च उच्चदरले बढे पनि कुल सञ्चालन आम्दानी सोभन्दा धेरैले वृद्धि हुँदा सञ्चालन मुनाफा बढेको हो । कर्मचारी तथा अन्य सञ्चालन खर्च क्रमश: ५९ र १८ प्रतिशतले बढेको छ भने कुल सञ्चालन आम्दानी ५६ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०६७ असार मसान्तमा रू. ६ करोड १ लाख ७६ हजार रहेको कम्पनीको सापटी गत असार अन्त्यमा रू. ७ करोड ४० लाख पुगेको देखिन्छ । सो अवधिमा लगानी २९ प्रतिशतले घटेको छ र कर्जा तथा सापटी ३८ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा व्यक्तिगत आवास कर्जा ९५ प्रतिशतले बढेर रू. ५ करोड ७५ लाख ४९ हजार पुगे पनि समग्र रियल इस्टेट कर्जा भने २८ प्रतिशतले घटेको छ । आव २०६७/६८ मा पनि बैङ्कले बिजनेश कम्प्लेक्स कर्जा प्रवाह गरेको छैन । तर, अन्य रियल इस्टेट क्षेत्रमा भने रू. ४ करोड ४६ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको मार्जिन कर्जा र ‘अन्य’ कर्जा दुवै ६३ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष(ओभर ड्राफ्ट) कर्जा घटेको छ । अधिविकर्षकर्जा शतप्रतिशत घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, आवधिक कर्जामा ९६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत असार मसान्तसम्म फाइनान्सको कर्जा-निक्षेप अनुपात ७५ दशमलव २१ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा यस वित्तीय संस्थाको कर्जा, तरलता, खुद मुनाफा आदि विवरणमा उत्साहजनक वृद्धि भएको देखिएको छ । सो अवधिमा फाइनान्सको निक्षेप १९ प्रतिशतले बढेर रू. ५० करोड ७० लाख ९७ हजार पुगेको छ भने कर्जा सापटी ४७ करोड १ लाख ९० हजार छ । हालसम्म यस संस्थाको वित्तीय स्थिति आफ्नो योजनाअनुरूप सन्तोषप्रद रहेको व्यवस्थापकले बताएको छ । चौथो त्रैमासमा बजारमा तरलताको सङ्कट विद्यमान रहे तापनि यस फाइनान्स कम्पनीको तरलता अनुपात ३२ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको र सो सन्तोषजनक रहेको व्यवस्थापकको भनाइ छ । फाइनान्सले जोखिमबापत छट्टयाएको रू. २ करोड ८० लाख फिर्ता भएको छ । यसले फाइनान्सको नाफा वृद्धिमा सहयोग पुगेको हो । आव ०६६/६७ को अन्त्यमा शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको फाइनान्सको निष्क्रिय कर्जा गत आवको अन्त्यमा पनि शून्य दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ । यही साउन १९ गतेको कारोबारअनुसार फाइनान्सको मूल्य आम्दानी अनुपात ६ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ ।